Warshad Gawaarida Bacriminta | Shiinaha Soo-saareyaasha Bacriminta Shiinaha, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
Xagasha Weyn VerWareegtada Suumanka Sidewall sidoo kale loo yaqaan 'conveyor belt belt conveyor conveyor') oo wata gaadiid u janjeera weyn. Sidaas darteed waa qalab ku habboon in lagu gaaro gaarsiinta xagal ballaaran. Si ballaadhan ayaa loogu qaatay mashaariicda dhulka hoostiisa.
Wiishka baaldiga waxaa badanaa loo isticmaalaa gaadiidka tooska ah ee walxaha granular
sida looska, macmacaanka, miraha la qalajiyey, bariis, iwm. Waxaa loogu talagalay birta aan birta ahayn
dhismaha nadaafadda, qaabeynta waarta, joog sare oo qaadista iyo awoodda gaarsiinta badan.